Politika… ady fiady sady fitady | NewsMada
Politika… ady fiady sady fitady
Tsy hiara-mitantana amin’ny fitondrana, hono, ny mpanohitra. Izay indray izao no hoe malaza? Nefa mila fifanakalozan-kevitra amin’izany. Izany moa no inona? Nefa rehefa tsy omen-danja na tsy ekena na tsy tanterahina, ohatra, ny hevitry ny tena dia tezitra, mirintona, mitsikera, mankahala, manakorontana… Ahoana ihany e?
Tsy efa karazana fiaraha-mitantana ve, ohatra, ny hoe fifanakalozan-kevitra isaky ny mihetsika? Na hakana hevitra sy hierana amin’ny mpanohitra sy ny mpanao politika avokoa izay atao rehetra… Inona intsony no ilàna ny fifidianana raha izany? Ny fifidianana no mametraka mazava ny olom-boafidy amin’izay sehatra izay.
Ao anaty rafitra amin’ny alalan’izay fifidianana izay no ahazoana miady hevitra sy mandresy lahatra mazava sy milamina, arakaraka ny toerana azo. Izay no iadiana mafy hahazoana ny maro anisa eny anivon’ny Antenimierampirenena, raha te hohenoin-teny na tsy maintsy henoin-teny. Mety mahazo toerana minisitra aza amin’izany.
Fa tsy ivelan’ny rafitra ara-dalàna mandrakariva no mihevi-tena ho tsy azo ialana, mampiaka-peo isaky ny mihetsika… Ekena, mila henoina ny hevitry ny vitsy anisa, na tsy ao anaty fanjakana aza. Samy tompon-tanindrazana, saingy tsy voatery ekena na tanterahina izay lazainy. Ny an’iza koa no hoe tanterahina amin’izany?
Ekena, mila jerena amin’ny maso tsy miangatra izay tena mahasoa ny fiainam-bahoaka sy mahatsara ny raharaham-pirenena amin’izay atao. Saingy tena amin’izay ve ny lalan-tsain’ny hoe mpanohitra sasany amin’izao? Eo ihany ny hoe politika lazaina na heverina na ahina ho misy ambadika hatrany fa tsy mandeha ho azy amin’izao.
Ny politika dia politika, arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa tadiavina na iadiana na arovana. Amin’ny fifidianana no tena ady fiady amin’izany, na toy inona fiheveran-tena sy izay lazaina; eny, na ny fiheverana sy izay lazaina ny amin’izany fifidianana izany aza. Politika io, ady fiady. Hita eo ny hoe: iza no manao inona?